Rosa Montero, akapihwa iyo National Literature Prize 2017 | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Guillen | | Makwikwi neMubairo, Vanyori, Mabhuku, Literature
Nezuro, Mbudzi 13, akapihwa iyo National Zvinyorwa Mubairo 2017 kumunyori Rose Montero. Kubva Zvazvino ZvinyorwaChekutanga pane zvese, makorokoto munyori nemubairo wakakodzera uyu uye tinokusiyai, isu vaverengi, nepfupiso yemabhuku ake mashanu akanakisa. Kana usati waverenga chero chinhu chake, uyu ndiwo mukana wako. Sarudza chimwe cheizvi chatinopa pano, icho chatiri kuda kugutsikana kuti uchachida, chero sarudzo yako
1 «Nyaya dzevakadzi» (Alfaguara, Ndira 2012)
2 «Vanoda uye vavengi» (Alfaguara, Ndira 2012)
3 «Nhoroondo yemambo akajeka» (Alfaguara, Ndira 2012)
4 "Pfungwa isina musoro yekusazombokuona zvakare" (Seix Barral, 2013)
«Nyaya dzevakadzi» (Alfaguara, Ndira 2012)
Mumashoko emunyori iye amene, «Iri bhuku rinounza pamwechete, mune imwe vhezheni yakawedzerwa, nhoroondo dzevakadzi dzandakaburitsa muSvondo yekuwedzera yeEl País. Ini handina chokwadi chekumisikidza aya mabasa: kunyangwe iwo akanyorwa zvakanyanya, iwo haasi edzidzo biografies kana ezvinyorwa zvevanyori, asi anodakadza kwazvo, chaiwo magwaro. Idzo inyaya dzevakadzi vakasarudzika dzandakaedza kunzwisisa. Kune vane rupo uye kune vakaipa, mbwende kana vakashinga, vanonetsa kana vanotya; Ese ari, hongu, epakutanga chaizvo uye mamwe anokatyamadza nekuda kwehunhu hunoshamisa hwezviitiko zvavo. Asi ndinofunga kuti, kunyangwe zviite sezvisina kujairika, tinogona kugara tichizviziva tiri mavari. Uye ndezvekuti mumwe nemumwe wedu anovharira mukati make hupenyu hwese ».
"Vanoda uye vavengi" (Alfaguara, Ndira 2012)
Mubhuku rino tinogona kuwana nhevedzano yenyaya. Nhau dzinotaura nezvemagwaro anobata nenzvimbo ine rima iyoyo yemafaro uye kurwadziwa ndiyo vaviri vacho: ndiko kuti, vanobata nerudo nekushayikwa kwerudo, kudiwa uye kugadzirwa kweumwe. Idzo ndidzo nyaya dzinotaura nezvechido chenyama uye neshungu; kubva pane tsika uye kusagadzikana; yemufaro negehena.
Idzi nyaya, kazhinji dzinovhiringidza, dzinorwadza, dzizere nekusetsa uye kushushikana kwerudo, zvinoumba girazi rinoratidzira rehukama hwedu hwakasviba uye hwakadzama, hwenzvimbo yegomba rakadzika uye risingapindiri iro rinoramba kuramba kutumidzwa zita.
"Nhoroondo yamambo akajeka" (Alfaguara, Ndira 2012)
Muzana ramakore regumi nembiri, Leola, musikana ari kuyaruka murombo, anokurura murwi akafa panhandare yehondo uye anopfeka nguo dzake dzesimbi, kuti azvidzivirire pasi pekuzvivanza. Saka inotanga nyaya inonetesa uye inonakidza yehupenyu hwake, chiitiko chiripo chisiri chaLeola chete asi cheduwo, nekuti inovavhisi yenoverengeka ine inonakidza yezvigadzirwa iri kutitaurira nezvenyika iripo uye zvatiri isu tese.
"Nhoroondo yeMambo Asingazivikanwe" zvinoshamisa rwendo kune isingazivikanwe Middle Ages iyo inonhuhwa uye inonzwika paganda, ingano inofamba nehukuru hwayo, ndeimwe yemabhuku asingaverengerwe, asi akararama. Yekutanga uye ine simba, bhuku raRosa Montero rine iro simba rinofashukira remabhuku akafanirwa kuve echinyakare.
"Pfungwa isina musoro yekusakuona futi" (Seix Barral, 2013)
Rosa Montero paakaverenga pepanhau rinoshamisa iro Marie Curie Yakatanga mushure mekufa kwemurume wavo, uye inosanganisirwa kumagumo ebhuku rino, akanzwa kuti nyaya yemukadzi iyeye anonakidza akatarisana nenguva yake yakazadza musoro wake nemifungo uye nemanzwiro.
Pfungwa isina musoro yekusazokuona zvakare yakazvarwa kubva kumoto wemashoko, kubva kuchamupupuri chinotyisa. Kutevera basa rinoshamisa raCurie, Rosa Montero anovaka rondedzero hafu pakati pekurangarira wega neyekurangarira kwevanhu vese, Pakati pekuongororwa kwenguva yedu uye nehukama hwepedyo. Aya ndiwo mapeji anotaura nezvekukunda kurwadziwa, hukama pakati pevarume nevakadzi, runako rwepabonde, kufa kwakanaka uye hupenyu hwakanaka, sainzi nekusaziva, simba rinoponesa remabhuku uye huchenjeri hweavo vanodzidza kunakidzwa nehupenyu zvizere uye zvishoma.
Iri mhenyu, yemahara uye yepakutanga, bhuku iri risingabvumike rinosanganisira mafoto, ndangariro, hushamwari uye maanecdotes anoratidza kunakidzwa kwepakutanga kwekuteerera nyaya dzakanaka. Chinyorwa chechokwadi, chinonakidza uye chakaomarara chinokubata kubva pamapeji ekutanga.
An opera husiku Kusurukirwa iye anohaya gigolo kuti amuperekedze kune iyo show kuti agone kuita iye aimbova mudiwa godo. Asi chiitiko chemhirizhonga uye chisingafungidzirwe chinoomesesa zvese uye chinoratidza kutanga kwehukama hunovhiringidza, hwemakomo uye pamwe hune njodzi. Ane makore makumi matanhatu; gigolo, makumi matatu nemaviri.
Kubva mukuseka, asi zvakare kubva kune hasha uye kupererwa kweavo vanopandukira kukuvadzwa kwenguva, nyaya yehupenyu hwaSoledad yakabatana nenyaya dzevanyori vakatukwa muchiratidziro chaari kuronga kuNational Library.
Nyama Iyo yakashinga uye inoshamisa inoverengeka, yakasununguka uye yakawanda kwazvo yeavo Rosa Montero akanyora.
Iri basa rave richikunda, pakati pevamwe, ve Chitubu Novel Mubairo, el Grinzane Cavour Mubairo, el Chii chekuverenga Mubairo weBhuku Rakanyanya reGore and the Madrid Vatsoropodzi Mubairo.
Iwe unoda here zvimwe zvikonzero kuti uverenge munyori mukuru uyu? Kana zvirevo izvi zvisina kukugutsisa, hatizive zvichaita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Rosa Montero, akapihwa iyo National Literature Prize 2017